Nifarana ny fitsidihana apostolika: hanao veloma ny Papa Fransoa, ny Malagasy, anio | NewsMada
Nifarana ny fitsidihana apostolika: hanao veloma ny Papa Fransoa, ny Malagasy, anio
Ho an’ireo afaka manao izany ihany satria andro fiasana sady mbola anatin’ny fanadinana BEPC izao. Handao an’i Madagasikara tanteraka ny Papa Fransoa, izao maraina izao, rehefa nivahiny hefarana teto amintsika. Raha tsy misy ny fiovana, hiainga amin’ny 9 ora sy sasany ny fiaramanidina hitondra ny Ray masina eny Ivato, sy ireo delegasiona niara-dia taminy. Anisan’ny lalana holalovany ny eny Ivandry, toerana hiaingany ary hihazo amin’iny Alarobia sy Ankorondrano iny.
Hanofahofa tanana sy saina…
Hiditra amin’ny lalam-baovao, Tsarasaotra avy eo ary hihazo ny eny Ivato, eo amin’ny fiangonana katolika Mb Terezzy Jesoa Zazakely, mialoha ny hidirany ao faritry ny seranam-piaramanidina ao amin’ny Bani. Tokony arahina ihany anefa ny fepetra amin’ny toerana holalovany ho an’ireo afaka manao veloma azy na manofahofa tanana sy saina eny an-dalana rehetra eny. Hanatitra azy eny Ivato avokoa ny avy amin’ny fitondram-panjakana sy ireo olobe eo anivon’ny fiangonana katolika eto amintsika, hotarihin’ny kardinaly Tsarahazana Desiré sy ny arsevekan’Antananarivo.
Samy nahazo ny anjarany avokoa…
Tsiahivina fa avy nitety firenena telo : i Mozambika sy i Madagasikara ary i Maorisy ny Papa Fransoa tamin’izao fitsidihana faha-31 nataony izao. Samy nametrahany hafatra avokoa ny vahoaka sy ny kristianina amin’ireo firenena ireo. Anjaran’ny tsirairay ny mandinika sy mamakafaka ary mandray izany. Nahazo ny anjarany avokoa ny rehetra : mpitondra fanjakana, mpanao politika, fiarahamonim-pirenena, mpitondra fivavahana, ny vahoaka sy ny kristianina, ireo mahantra sy ny mpiasa ary ny tanora…
Hanao tatitra ny fitsidihana teto ny kardinaly…
Ankoatra izany, hihaona amin’ny mpanao gazety avy hatrany ny kardinaly aorian’ny fandehanan’ny Papa Fransoa. Tombanana fa hanao tatitra ny fitsidihan’ny Ray masina teto Madagasikara ary koa mety hitondra fanamarihana samihafa momba izany. Anisany ohatra ny fanomanana sy fikarakarana… Eo koa ny fisaorana ireo rehetra vy nahitana sy angady nanana ny fahatongavany sy ny fandraisana teto amintsika.